I-Munroe Island Riverfront Cottage - I-Airbnb
I-Munroe Island Riverfront Cottage
Munroe Island, Kerala, i-India
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Sunaina
Ikhaya le-Munroe lokhuni liyisiqalo ku-Green Chromide Homestays. Indlwana yayo encane yamapulangwe ethokomele ebheke umfula omuhle we-Kallada. Itholakala esiqhingini esibizwa ngokuthi yi-Munroe Island esifundeni sase-Kollam, i-South of Kerala iyindawo ekahle kakhulu yokuchitha iholide lakho.
Indawo yethu iyisakhiwo esithokomele esiphelele sokhuni esinawo wonke amasevisi esimanje. Le ndlu iseceleni komfula nebhishi yangasese, i-hammock kanye nophahla olunamathayili amancane ukuze uphumule eceleni komfula.
Sinikeza i-Kerala style veg yangempela kanye nokudla okungekona okwe-veg. Ikhethekile ku-curry yenhlanzi kanye nezinhlanzi.
Indawo yokudlela: Indawo yokudlela
engasemfuleni Amagumbi okugeza: Ngalinye linendawo yokuwasha, Thepha. 1 i-European WC, i-shower.
Ezinye izinto ezifakiwe: I-ayini enebhodi loku-ayina izonikezwa ngesicelo, i-WiFi engenantambo yamahhala ( hhayi ijubane eliphakeme) yokusetshenziswa okuyisisekelo kanye nendawo yokupaka izimoto yamahhala. Amabhayisekili ayatholakala ngezindleko eziphawulekayo.
Le ndawo eyabantu abangathanda ukujabulela impilo yasemaphandleni enokuthula yase-Kerala. Iningi lendawo lizungezwe amanzi. Lesi siqhingi sakhiwa ukudideka kwechibi nomfula. Inemizila emincane, ama-lagoons, amapulazi anodumo kanye namapulazi e-chromide aluhlaza, ama-backwaters, ama-mangroves, iziqhingi ezingagciniwe, njll. Iyidolobhana elincane elinabantu abalula nabanobungane.
Hlola ezinye izinketho ezise- Munroe Island namaphethelo